ब्ल्याक भिलेज- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
जेष्ठ ४, २०७६ रोशन शेरचन
प्राक्कथन डायनोसर थेरम भन्ने त्यस्तो कुनै थेरम छैन  । यो एउटा काल्पनिकी हो  ।
तर अर्थको हिसाबले त्यो थेरमलाई डायनोसर थेरम भन्न सकिन्छ । त्यस थेरमले भन्छ— मलाई नपढे, नबुझे र व्यवहारमा लागू नगरे, तिम्रो नियति पनि डायनोसरजस्तै हुनेछ । अथवा तिमी पनि लोप हुनेछौं । समाजमा अनेकन् डायनोसरहरू भेटिन्छन् । जैविक अर्थमा होइन । वैचारिक अर्थमा । यसबारे अन्तिम अनुच्छेदमा लेखेको छु ।
साहित्य विज्ञानको नजिक बस्छ कि कलाको ? के साहित्य विज्ञानको विपरीत उभिन्छ ? राजनीतिसँग साहित्यको कस्तो सम्बन्ध हुन्छ ? सामाजिक यथार्थवादी र प्रयोगशील धारका शक्ति र सीमा के हुन् ? के वास्तवमै स्वैरकल्पनाले सामाजिक यथार्थलाई कमजोर बनाउँछ ? आदि महत्त्वको प्रश्नहरूमाझ हामी घेरिएका छौं ।
सहज ज्ञानले साहित्यलाई कला भन्छ । तर सौन्दर्यशास्त्रमा, साहित्यलाई सौन्दर्यपरक विज्ञान प्रवर्गअन्तर्गत राखिएको छ । यसले संकेत गर्छ— साहित्य सौन्दर्यशास्त्रको एउटा प्रशाखा हो र यसले सौन्दर्यशास्त्रका आधारभूत नियमहरूको पालना गर्छ । तर अधिकांश साहित्यले विज्ञानका नियमहरूको अवज्ञा गरेको पाउँछौं । साहित्यका विशेषता र प्रभावहरूको विज्ञानसम्मत व्याख्या धेरै भेटिँदैन । धेरै त मनोगत व्याख्या नै छ । भावुक व्याख्या त छ्यालब्याल । तापनि साहित्यको सृजन प्रक्रिया र वैज्ञानिक पद्धतिबीच हामी केही सम्बन्ध भेट्छौं । त्यस्ता केही समानताबारे यहाँ चर्चा गर्नेछु ।
मूलत वैज्ञानिक पद्धतिहरू तीन प्रकारका छन् । प्रथम, अवलोकन (अब्जर्भेसन) पद्धति जसलाई जीववैज्ञानिक चार्ल्स डार्बिनले लोकप्रिय बनाए । यसको महत्त्व संसारभरि फैलाए । गालापागोस द्वीप, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, चिलेका जीव, चट्टान, जीवाशेष र त्यसका नमुनाहरू संकलन र अवलोकन गरी डार्बिनले इभलुसनको सिद्वान्त प्रतिपादन गरे । अन्य धेरै वैज्ञानिक पनि छन् । तर डार्बिन प्रमुख थिए । दोस्रो कल्पनाशीलताको (इमाजिनेसन) पद्धति थियो, जसलाई आइन्स्टाइन र स्टिफन हकिन्सजस्ता भौतिकशास्त्रीहरूले विकास गरे । विस्तार गरे । आइन्स्टाइनको सापेक्षवादको सिद्धान्त धेरै दशकपछि सही ठहरियो । अर्बौं वर्षअगि दुई विशाल ब्लाकहोल ठोक्किई महाविस्फोटबाट (बिग ब्याङ्) उत्पन्न तरंगका ध्वनि सन् २०१४ मा पृथ्वीमा आइपुग्यो जसलाई अत्याधुनिक उपकरणले त्यसलाई रेकर्ड गर्‍यो । भर्खर खिचिएको ब्लाकहोलको तस्बिरले पनि यी वैज्ञानिकहरूको कल्पनाशीलता सत्य भएको पुष्टि भयो ।
तेस्रो प्रयोगको (एक्सपेरिमेन्टल) पद्धति । न्युटन र ग्यालिलियो आदि वैज्ञानिकले प्रयोग (एक्सपेरिमेन्ट) गरी पदार्थका गुण र विशेषता पत्ता लगाएका थिए । साहित्य अवलोकन, कल्पनाशीलता र प्रयोगको (?) बाटो हुँदै जन्मँदो रहेछ । यी वैज्ञानिक पद्धतिहरूको आलोकमा साहित्य सृजनका केही उदाहरणहरू हेरौं ।
सबभन्दा चल्तीको पद्धति अवलोकन हो । यसलाई निरीक्षण पद्धति पनि भन्छौं । अवलोकनलाई अन्वेषणको एक सबल माध्यम मानिन्छ । जीवन विज्ञानमा मात्र होइन, सामाजिक विज्ञानमा पनि यसको प्रयोग बढ्दो छ । लेखकले आफ्नो समाजको अवलोकन वा आफ्नो रुचिको फरक समाजको भ्रमण गरेर त्यहाँका रैथाने बासिन्दाहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै साहित्यको विषयवस्तु खोज्नु यसअन्तर्गत पर्छ । प्राथमिक रूपमा, सामाजिक यथार्थवाद धारको साहित्य यही पद्धतिमा निर्भर छ ।
नयनराज पाण्डेले ‘उलार’, ‘लू’ को निम्ति नजिकदेखि देख्दै भोग्दै आएको नेपालगन्जको खास समाजलाई टिप्नु, सरस्वती प्रतीक्षा ‘नथिया’ लेख्न पश्चिमका बादी बस्ती पुग्नु यसका दृष्टान्त हुन । कल्पनाशीलताकै बलमा कसैले उलारजस्तो उत्कृष्ट आख्यान लेख्न सक्दैन । इतिहाससम्बद्ध साहित्य लेख्न सन्दर्भ सामग्रीको जोहो अत्यावश्यक काम हो । तत्् विषयका क्षेत्रगत भ्रमणमा निस्कनु, स्थानीय बासिन्दाबाट मिथक र तथ्यहरू संकलन गर्नु र विज्ञहरूको राय लिनु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । कि विषयमा जानकार हुनुपर्‍यो अन्यथा अन्वेषणमै निस्कनुपर्‍यो । सामाजिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरणमा भिज्नु यसको अर्को ध्येय हो ।
नारायण ढकालको ‘प्रेतकल्प’, नीलम कार्की निहारिकाको ‘योगमाया’, भूपिनको ‘मैदारो’, श्रवण मुकारुङको ‘बिसे नगर्चीको बयान’, राजन मुकारुङको ‘हेत्छाकुप्पा’, यज्ञशको ‘भुइँया’, तीर्थ गुरुङको ‘पाठशाला’, उमा सुवेदीको ‘तोदा’ प्राथमिक रूपमा अवलोकन पद्धतिबाट जन्मिएका कृृृति हुन् । नारायण ढकाल काँठका बासिन्दा हुँदैनथे भने, ‘प्रेतकल्प’, ‘हजारमाइल’ को बाटोजस्ता इतिहाससम्बद्व आख्यान सायदै लेखिन्थे । त्यो भिन्दै कुरा, अवलोकनमा केही लेखकको आफ्नै अनुभव पनि मिस्सिएका छन् । अवलोकन, अन्वेषण र अन्तरक्रियाकै योगमा सृजनाहरू सम्भव हुन्छन्, यस पद्धतिमा ।
डार्बिनले लोकप्रिय बनाएको यो पद्धतिले आडभरोसा दिन्छ— अवलोकनबाट पनि प्रमाणहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ । निरन्तरको अभ्यासले लेखन परिष्कृत बन्दै जान्छ । यसमा धैर्य त्यसरी नै अनिवार्य सर्त हो, जसरी विकासवादको सिद्धान्तमा करोडौं वर्ष लिई प्रजातिहरू आफ्नो वातावरणमा बाँच्न अन्यभन्दा फिट हुँदै जान्छ ।
दोस्रो वैज्ञानिक पद्धति छ, कल्पनाशीलता । प्रयोगधर्मी लेखकहरू यो पद्धति प्रयोग गर्छन् । प्रयोगधर्मी लेखकहरू संख्यामा कम भएकाले पनि यो पद्धति कम चल्तीमा छ । सरुभक्तको ‘पागल बस्ती’, कुमार नगरकोटीको ‘मिस्टिका’, गणेश पौडेलको ‘पैताला’ यस मार्काका पुस्तक हुन । यस पद्धतिले कथा, पात्र चयन र चरित्रचित्रणमा लेखकलाई खेल्न फराकिलो मैदान दिन्छ । परम्परा र यथार्थमा बाँधिनु नपर्ने भएकाले कल्पनाशील लेखकहरू यस पद्धतितिर आकर्षित हुन्छन् । यसमा लेखकको अभीष्ट हुन्छ, कल्पनाको बलमा भावभूमि, कथा र चरित्रलाई जति परसम्म लग्न सकिन्छ, लैजाने । यथार्थमा जे भइरहेको छ, त्योभन्दा पनि कस्तो हुनुपर्छ ? कस्तो हुन सक्छ ? त्यसको चित्रण गर्ने ।
इतिहास सम्बद्व लेखनभन्दा भविष्यउन्मुख (फ्युचरिस्टिक) लेखनका निम्ति यो उपयोगी छ । अधिकांश नेपाली साहित्य विगतमुखी भएकाले कल्पनाशीलतालाई स्थान कम छ । इतिहाससम्बद्ध लेखन पनि प्रकारान्तरले विगतमुखी लेखन नै हो यद्यपि त्यसको प्रयोजन भिन्न छ । राजनीतिक व्यंग्यको क्षेत्र त अत्यन्त टाक्सिएको छ, जबकि यो उपविधालाई कल्पनाशील पद्धति अत्यन्त उपयुक्त हो । राजनीतिक क्षेत्रमा घनघोर कमेडी र विद्रूपता व्याप्त छ तर आख्यानमा त्यसको कतै प्रतिविम्ब छैन । हास्यव्यंग्य गाईजात्राभन्दा माथि उक्लेन । ‘एनिमल फार्म’ र ‘नाइन्टी एटी फोर’ जस्ता आख्यान नेपालीमा कहिले लेखिने होला ?
केही लेखक छन्, जो मूलतः सामाजिक यथार्थवादी हुन् तर स्वैरकल्पनाका सहारा लिन्छन् । ध्रुवचन्द्र गौतम, नारायण ढकाल र नयनराज पाण्डेलाई यस कोटीमा राख्न सकिन्छ । अधिकांश प्रगतिशील लेखक स्वैरकल्पना उपकरण देखेरै तर्सन्छन् । उनीहरूलाई लाग्छ, स्वैरकल्पनाले लेखनको लक्ष्यबाट अल्मलाउँछ र त्यो पलायनको बाटो हो । माथि उल्लिखित लेखकहरू स्वैरकल्पनाको प्रयोग गर्छन् तर उद्देश्य हुन्छ— सामाजिक यथार्थको प्रभावलाई नै सघन बनाउने । यथार्थ र कल्पनाको दशगजामा बस्ने यी गोधूलिका लेखक हुन् । पाटेभीरलाई आख्यानीकरण गरिएको आख्यान मैदारो मार्फत भूपिन पनि यसै कोटीमा थपिएका छन् ।
यसको विपरीत, कल्पनाशीलतालाई प्रधान्य दिने प्रयोगधर्मी लेखकहरू यथार्थसँग धेरै सरोकार राख्दैनन् । बरु उनीहरू आफ्ना सृजनाले पाठकलाई नदेखेको ठाउँ देखाउने, नसुनेको कथा सुनाउने, नचिताएको घटना देखाउने र कल्पनामा पनि सोच्न नसकेको लोकमा लग्नुपर्ने आग्रह राख्छन् । त्यस्ता लोक युटोपियन वा डिस्टोपियन दुवै प्रकारका हुन सक्छन् । यस कोटीको सृजनालाई बेपत्ताको स्वैरकल्पना (बिजार) भन्नु उपयुक्त होला । यथार्थसँग जसको रत्तिभर साइनो हुँदैन तर पाठकलाई यस्ता कथाले विस्मयको स्थितिमा लगेर छाड्छ । मानसिक झट्का, भय, कौतूहल, बीभत्सता, उत्तेजना, वासना र विरानोपनलगायतका प्रभाव उत्पन्न गर्छन् । यस्ता प्रभावविचारको तहमा भन्दा पनि इन्द्रियको तहमा उत्पन्न हुन्छजस्तो लाग्छ । यी प्रभावलाई तर्कको पद्धतिले खासै भेउ पाउन सकिँदैन ।
सरुभक्त, नगरकोटी, गणेश पौडेल आदि यस वर्गका प्रतिनिधि लेखक हुन् । विगतमा ‘विर चरित्र’, ‘विरसिक्का’ जस्ता तिलस्मी उपन्यासहरू लेखिन्थे । बीस, तीसको दशकमा रोमाञ्चकता र रहस्य खोज्ने पाठकले नेपाली जासुसी उपन्यासमै भर पर्नुपर्‍यो । त्यसपछि यस्ता उपन्यासहरू लुप्तप्रायः भए । २०४६ को जनआन्दोलन, दसवर्षे माओवादी सशस्त्र यूद्वपछिका तीव्र राजनीतिक घटनाक्रमले सामाजिक यथार्थवादी धारलाई मलिलो धरातल प्रदान गर्‍यो । फलस्वरूप भुइँमान्छेको कथा, फेमिनिज्म र पहिचान साहित्य लेखन अहिले उत्कर्षमा छ । तर राजनीतिक संक्रमण सकिँदै गएको अवस्था र विज्ञान प्रविधिको तीव्र विकासले स्वैरकल्पनालाई फेरि उर्बर भूमि प्रदान गरेको छ । विजार स्वैरकल्पनाले आख्यानमा पुर्नजन्म लिएको देखिन्छ । नगरकोटीको सृजनात्मक सनकले त्यो गोरेटो कोरेको छ । त्यो गोरेटोले कति परको गन्तव्य छोला ? त्यो भविष्यकै गर्भमा छ ।
तेस्रो प्रयोगको पद्धति सायद साहित्य सृजनको निम्ति उपयुक्त छैन । साहित्य वस्तूत मानसिक निर्मिति भएकाले भौतिक विज्ञानको पदार्थझैं प्रयोगमा लग्न नसकिएको हो । साहित्य सृजनमा कल्पनाशीलताको वा निरीक्षणको प्रयोग गर्न सकिन्छ तर एक्सपेरिमेन्टकै अर्थमा सायद असम्भव छ ।
माथि केही वैज्ञानिकको नाम लिन परेको कारण नितान्त प्राविधिक छ । लेखकहरूलाई वैज्ञानिकसँग तुलना गर्नु मेरो ध्येय होइन । त्यो न सम्भव छ, न सुहाउँदो । यस लेखको उद्देश्य, पद्धतिको आधारमा साहित्य सृजना र विज्ञानबीच केही समानता देखाउने मात्र हो ।
सीमा र शक्ति
लेखकको चेतना विज्ञानसम्मत हुन आवश्यक छ/छैन ? ठूलो प्रश्न हो । साहित्य विज्ञान नभएकाले, कला भएकाले विज्ञानसम्मत हुन कति आवश्यक छ ? जिज्ञासा उब्जिन्छ । फेरि सौन्दर्यपरक विज्ञानको दर्जा दिइएकाले साहित्यमा विज्ञानको वस्तुनिष्ठता आवश्यक पनि होला ? प्रश्नले गहन छलफल माग्छ ।
केही छरिएका जवाफ वरपर देख्न सकिन्छ । मोटामोटी के भन्न सकिन्छ भने सामाजिक यथार्थवादी लेखकहरू विज्ञानसम्मत चेतनालाई आवश्यक तत्त्व मान्छन् । उनीहरू सिद्वान्ततः कन्टेन्टमा बढी जोड दिन्छन् । कन्टेन्ट तार्किक र रूपान्तरणको निम्ति हुनुपर्ने आग्रह राख्छन् । कोही त मुखर रूपमा क्रान्तिकै लागि लेख्नुपर्ने मान्छन् । त्यस्ता लेखकहरूलाई अभियन्ता लेखक भन्न सकिन्छ । राजनीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएर मुद्दा केन्द्रित विषयमा लेख्ने र तत् पार्टीसँग आबद्व लेखकहरू यस कोटीमा पर्दछन् । नवीनताप्रति सिद्वान्ततः उदासीनता र पुरातन फरम्याटको कथा वाचन सामाजिक यथार्थवादी धारको सिमा हो । साहित्यको प्रयोजन विस्मय नभएकाले यस्ता साहित्यमा नवीनता निम्छरो भेटिन्छ । केही साहित्यकारहरू सोच्छन्— साहित्यको सामाजिक दायित्व हुन्छ, साहित्यले क्रान्ति र समाज रूपान्तरणमा सघाउँछ तर सोझै नभएर अप्रत्यक्ष । नारायण ढकालजस्ता गैरसरकारी मार्क्सवादी लेखकहरू यस कोटीमा पर्छन् ।
यसको विपरीत, कल्पनाशीलता र स्वैरकल्पनालाई प्रधान्य मान्ने धारका लेखकहरूको ध्येय विस्मय र रोमाञ्चकता भएकाले, उनीहरू नवीनतालाई पस्कने (विषयवस्तु र शैली) मामलामा अगाडि हुन्छन् । यी लेखकहरूको निम्ति सौन्दर्यशास्त्र प्रत्यक्षतः उपयोगितावादी हुँदैन । कन्टेन्टलाई उनीहरू प्राथमिक महत्त्व दिंदैनन,् जति कथावाचनको शैलीलाई दिन्छन् । राजनीतिसँग खासै गाँसिंदैनन् । विज्ञानसम्मत नहुनु, सामयिक राजनीतिप्रति निरपेक्ष हुनु, भौतिकवादी दृष्टि चिन्तनभन्दा प्रत्ययवादी हुनु यस प्रवृत्तिको सीमा मान्न सकिन्छ ।
साहित्य लेख्नेहरूले विज्ञानबाट मात्र होइन, गणितबाट पनि सिक्न सक्छ । यो थेरमचाहिँ गणितबाट लिइएको हो । बेस् थेरमले भन्छ— तथ्यहरू फेरिए, धारणा पनि फेर्नु । जसलाई मनन र पालना गर्न सके डायनोसर हुनबाट जोगिन्छ । थेरममा तथ्यलाई धारणाको जग मानिएको छ । तथ्यको महत्त्वलाई बुझ्न नसकेर हो वा साधु बाबाहरूको पछि धेरै लागेर हो, केही लेखकहरू डायनोसर भैसके । तथ्यहरू फेरिइसके, धारणाहरू विगतकै तथ्यहरूमा आधारित छ ।
तथ्यहरू के हुन् ? कहाँ बस्छन् ? कस्ता स्थितिमा छन् ? त्यसका चालक शक्तिहरू के के हुन् ? निर्माण हुँदै गएको नयाँ यथार्थ के हुन् ? त्यसतर्फ दृष्टि नदिने हो भने, डायनोसरको पङ्क्तिमा थाहै नपाई हामी पनि उभिइने सम्भावना प्रबल छ । त्यसैले बेस् थेरमलाई डायनोसर थेरम भने । सचेत गराउने अर्थमा । सृजनात्मक लेखनमा लाग्नेहरूले बेस् थेरममा धेरै उपयोगी कुराहरू भेटाउन सक्छ।